कला /साहित्य Archives - बडिमालिका खबर
सबैका अनुहार उजगार हुन्छ घरी घरी, कुनैको जित कुनैको हार हुन्छ घरीघरी। कसैले त जिवन नै बिताए वेइमानी गर्दै, कसलाई इमान सँग प्यार हुन्छ घरिघरी। जनताले त छानेर पठाउँछन सिखर मा, नेता बिदेशीको बफादार हुन्छ घरी घरी। पढेकाले जान्दछन् कि परेकाले भन्छन, अनुभवीको थोरै आधार हुन्छ घरी घरी। कस्ले जित्यो कस्ले हार्यो कागलाई वेल, भ्रष्टचारका […]
शान्ति पुर्वक नै भयो मतदान खुसि लाग्यो, सुन्दर थ्यो स्युजामा प्राबधान खुसि लाग्यो। धेरैले बुझिसकेकाछन अब बिकास गर्नैपर्छ, चल्दैन त्यसै राजनीति दोकान खुसि लाग्यो। कति शुन्दरछ हामी जन्मिएको ठाउं केभनौं, कुनैपनि त लडेनन् जाना जान खुसि लाग्यो। देखिन्छ सेतो हिमाल चल्यो बिस्तारै बतास, कसैलेनि सुनाएन झुठा उखान खुसि लाग्यो। धेरै पछि भेट हुंदापनि नभुलेका साथिहरूले, […]
सुरेशकुमार पान्डे — पञ्चायति ब्यबस्थाले थिचोमिचो परेकाहरू यो ब्यबस्था फाल्न क्रान्तिको बाटो छोप्नैपर्छ हामीले देशभित्र कृषिक्रान्ति गर्नैपर्छ का.दिनेशले लामो प्रतिक्षाण दिंदै भनेका थिए।हामि एन जिओ आई एन जिओ बाट शुरक्षित रहनुपर्छ। का.भोलु गलु लगायतका थुप्रै समर्थकहरूको उपस्थिति थियो।गरिवीले पिल्सिएका किसान र मजदुरहरूले भरिएको गाउँमा कता कति दुईचार मुरि अन्न बेच्नेहरू पञ्चायती ब्यबस्थाका उनै कर्ता धर्ता […]
युवा युवती देशलाई कता लाने, सबै जिम्मेवारी तिम्रो काधमा छ। तर आज तिमीहरू रक्सी र मासुमा बिकेको देख्दा, असैय पीडा भैराछ।। यहाँ पैसामा अाफ्नो अमुल्य भोट, सजिलै बिकेको देखे। देशको भबिष्य एक दुई सयको, रिचार्ज कार्डमा टिकेको देखे।। नेताहरुले गलत भाषण गर्दा पनि, चिच्चाइ चिच्चाइ ताली ठोकेको देखे। देशलाई पछाडि धकेल्ने कुचेस्टा गर्नेका, झण्डाहरु लाभा […]
ए भाई मदिराको मातमा नभुल्नु क्रतब्य, एकछाक मासु र भातमा नभुल्नु क्रतब्य। भाग्यको के दोश जानिजानी गलतिगर्दा, हाम फाल्नु हुंदैन रातमा नभुल्नु क्रतब्य। एउटै घरका शन्तान हौं हामी मिलेर रहौँ, रहनै पर्छ सबै औकातमा नभुल्नु क्रतब्य। आउँछ हुरी बतास मत दान त गर्नै पर्नेछ, बुथमा आए नि बर्षातमा नभुल्नु क्रतब्य। जनता लोभ र भय बिनाको […]
गणतन्त्र बचाउन देश तिमी जुरुक्क उठ , हल्ला गर्नेले हल्ला गरि रहन्छ जनताका बैरिलाई भने ठाेक । २0७९ सालकाे निर्वाचन यसरी आएको छ , १९ दिने महान जनआन्दोलनकाे उपलब्धि खाने तरबरमा छ । जनताको उपलब्धि युरोपेली युनियन अमेरिका र भारत खान तयार छ, स्थानिय निर्वाचन गराउन जादा यिनिहरु खुसी भई बसेकाे छ । देशभक्त हु […]
मानिसलाई मात्र यो पिर हुनुगर्छ
मानिसलाई मात्र यो पिर हुनुगर्छ, ढुङ्गाको त शुन्दर तक्दिर हुनेगर्छ। याहाँ अप्राधी हिंडेकाछन खुल्ला, देशभक्तलाई पो जञ्जिर हुनेगर्छ। दलितले बनाए मन्दिर र मुर्ति पनि, खै प्रवेसमा निषेध लकिर हुनेगर्छ। चुनावमा छन दलित कति महिंला, भ्रष्टचारीकै सिरमा अबिर हुनेगर्छ। दलाल गद्धार लाई पाखा लगाउँनु, धेरैजसो मौकाप्रस्त अमिर हुनेगर्छ। लोभ लालचमा न परे पछुतो होला, आफ्नैघर चुनावपछि […]
फोहरी खेल (कबिता)
चुनाब फोहरी खेल हो भन्ने, थाहा थियो ।। तर यो धाक धम्की पनि रहेछ भन्ने, 2079 को स्थानीय चुनाबले खुलेआम बताइदियो।। निर्दोष जनताहरुको बिचमा मात्र, गुलिया नाराहरु आए। आज सम्म नारा नारामै सिमित भयो, जनताले सदा राहत भन्दा ठक्कर मात्र पाए।। आज पनि शहर पसेका नेताहरुको, लर्को छ गाउँ गाउमा। बिशाल कोणसभा र र्याली, भएका […]
जनता आफ्नै हातमा अमृत र जहर हुन्छ, मात्रृत्वकै रक्षागर्ने पनि सबैलाई कर हुन्छ। यो चुनाव पनि ठिक त्यस्तै हो बुद्धी पुराए, कहिले भर्षा भेल कहिले रित्तो बगर हुन्छ। चुनावकै लहरछ उता यता पानी पर्यो खुबै, समयमै खेति नगरे खाने केहोला डर हुन्छ। हिंजो एकथरीले भोट दिनुहोला भनेर गए, हुन्छ भनेर मनराखें उन्लाई पनि भर हुन्छ। […]
जनताहरू ले ढुङ्गा लाई पुजेर अघाए अब, सांच्चै भौतिकवाद सँग साइनो लगाए अब। निदबाट जतिवेला जाग्यौं उज्यालो देख्छौं, सुस्त सुस्त अंध्यारो लाई समेत धपाए अब। सरकारलाई पनि छिट्टै थाहाहुन्छ उज्यालो, युवाशक्ति देशको रिढहो सत्ता थमाए अब। आफ्नो देशको माटोसँग पनि मयाँ हुँनुपर्छ, देश को झण्डा र सम्बिधान न जलाए अब। नेता आत्मानिर्भर गराउँ अखण्ड देश […]
देश कंगाल हुन्छ जनताको वेहाल हुन्छ फटाहाले जिते, सधै देशैभरी फेरी नी ठुलो ब बाल हुन्छ फटाहाले जिते। जनता गणतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिलाई जिताउँनैपर्छ, देशैमा भ्रष्टचार मंहगी प्रत्येक साल हुन्छ फटाहाले जिते। आधा जनसंख्यलाई खाडी जापान र लाहुरमा पठाएर, यो निर्वाचनपछि पनि यही सवाल हुन्छ फटाहाले जिते। उत्पादनको नाउँमा घर घरै राजनीति पार्टीछन देशभित्र, देशैभरी […]
रातो झण्डा पनि हरिया मान्छेको ढाल भएकोछ आज रूपिया कमाउनेहरूकै जञ्जाल भएकोछ, जान्दैनौं काम गर्न चिन्दैनौं मित्र,दुश्मन लाई हामी, त्यसैले त धेरैजनाको मृत्यु पनि अकाल भएकोछ। हाम्रो देशले निर्यातगर्ने त युवा शक्ति मात्र देखियो, त्यसैले त देशमा जताततै आज ब बाल भएकोछ। हाम्रो देश बिगार्ने बिदेशी भन्दापनि कामचोरले हो, पेसाको लागि पेसेवर भएरनै देश गंगाल […]
पश्चिमी प्रभाव र हाम्रो ओपचारिकता!
सुरेशकुमार पान्डे — हाम्रो देशमा सबै औपचारिकता मात्रै किन हुन्छ? अहिले कुशे औंसीमा फेसबुकभरी आमाको तस्विर हालेर लेख रचनाहरू पस्किए,यो मात्र एउटा कुसे औंसिको उधारण हो तर यस्ता कयौं दिवसहरूको शन्दर्भरमा फेसबुक भरिन्छ। हुन त यो कुसे औंसी भारतमा मनाएको देखिएन कसै कसैले मनाउँदा हुन तर नेपालीहरूले यो सोसिल मिडियामा सक्यासम्म फोटाहरू अप्लोड गरेर औपचारिकता […]
लेखनमा धेरै उदेश्यछन रहर मात्र होइन, नदीमा पानी पनि हुन्छ बगर मात्र होइन। मलाई यही समाजनै बद्लुनुछ कलम ले, आमा आफ्नो यही एउटा घर मात्र होइन। अहिले लुटेराहरूले राज गरेकाछन यहाँ, मनभित्र आक्रोश पनिछ डर मात्र होइन। संसारको शक्तिशाली कलम र तरवारहो, समाज बदलियो धर्ति अंबर मात्र होइन। एकक्षाण सोंच्छु एकान्तमा शक्तिकै बारे, साहित्ये साधना […]
कस्तो खालको गठबन्ध भएछ
साइला दाईको घुडाको गोली जस्ताको तस्तै रहेछ २ पाँच वर्ष अगाडी हालेको भोट त्यसै खेर गएछ तै पनि नेपालमा फेरी गठबन्धन भएछ अघिल्लो चुनावमा दुई पार्टी बिच टाउको फुटालाफटल भएछ २ अगाडी दुई थियो अहिले पाँच पार्टी रहेछ जसरी नि चुनाव जित्न फेरी गठबन्धन भएछ चालिस काटेपछि रमाउन साइला खाडी गएछ २ जुन जोगी आए […]
आमा हुनुभएको ठाउँ कति भरिलो हुन्छ, म मताको आंचलमा बांच्न सजिलो हुन्छ। मलाई भगुवान भन्नु आमाको चरणनै हो, बांकी सबै ढोङ्ग पाखण्ड अगत्तिलो हुन्छ। मान्छेहरूले कामलाई पुजा सम्झिनु राम्रो, अल्छिको बिचारनै सधैभरी अमिलो हुन्छ। स्वर्ग यहीं नर्क यँही अन्तहुंदैन कुनै बसेरा, आमा शब्दनै संसार भरीमा व़झिलो हुन्छ। आमा बिनाको श्रृष्ठीछैन चराचर जगत मा, म मताकै […]
एक मई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको बारे!
१३३औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस सफल पारौँ! सुरेशकुमार पान्डे। शिकाको शहिदहरूलाई लाल शलाम! एक मई अमर रहोस्! दुनियां भरिका श्रमजिविहरू एक हौं! हो!यहि नाराले दुनियाभरीका श्रमजीवी शोशित पिडीतहरूलाई संगठित गर्दछ र आफ्नो अधिकारको लागी शंघर्ष गर्ने प्रेणा दिन्छ।दुनियांभरीका श्रमजिविहरूले एक में लाई मजदुर एकता दिवसको रूपमा पनि मनाउँदै आएकाछन। हाम्रो संगठनले एक्लै वा अन्य मजदुरहरूका भाइचारा […]
मई दिवश लाई सम्झदा । रबि पाैडेल अाठ घण्टा काम अाठ घण्टा विश्राम र अाठ घणटा मनाेरञ्जन काे माग राखेर अमेरिका काे शिकागो शहर मा सन १८८६ मा मजदुर अान्दोलन भयाे शहर ठप्प पार्दै मजदुर हरु ले गाेलि चल्यो त्यहाँ ,बम फ्याकियाे अाधा दर्जन काे हत्या भयाे सयाै मजदुर घाईते भए त्यो दिन लाई सम्झदा […]
देशलाई ठुलो खतराछ यिनै वे-मानले गर्दा, बिकासक नाममा गर्ने त्यही उखानले गर्दा। छोरा छोरीलाई चत्रक छाडेर बिदेश हिंड्यौं, आफ्नै घरमा भोका र प्यासा जहानले गर्दा। बा आमा बोझभए ढुङ्गा भन्दापनि उसलाई, आमा बा भन्दा धेरै आस्था भगुवानले गर्दा। ज्युँदालाई सिटामोल दिन न सक्नेहरू पनि, बृद्धाको नाम मा शुन चढाउंदैछ शानले गर्दा अचेल मन्दिरमा पनि खिचातानी […]
काठमाडौँ — सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी बबरमहलमा गत चैत २८ गतेदेखि कलाकार सविता डङ्गोलको एकल चित्रकला प्रदर्शनी सुरु भएको छ। प्रदर्शनी आजसम्म जारी रहनेछ। प्रदर्शनीमा कलाकार डङ्गोलले दुई युगल जोडीले स्वीकार गरेको वास्तविक विचार र कल्पनालाई समायोजन गरेका छन्। उनका अनुसार हरेक चित्रमा एक अर्कालाई जोड्नका लागि काइँयोलाई एक बिम्बको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।चित्रमा प्रयोग गरिएका […]
कति पाउँनेछन सिट दलित चुनावको वेला, कति महिंलाको होला जित चुनावको वेला। कुन कुन पार्टीले सम्बिधानको मर्म बुझ्छन, यो अवसरमा गर्ने छन हित चुनावको वेला। समावेसी समाजवाद अनमुख छ सम्बिधान, के कतिले लगाउंने हुन मित चुनावको वेला। थाहाछैन लेखाजोखा छानबिनगरौं मित्रहरू, धेरै ले दन्तेकथा र गाए गित चुनावको वेला। पुंजिवादी वुजुर्वा को जगमा हुँने निर्वाचनले, […]